« Festival Rio Loco » : misongadina ny mozika malagasy maroloko | NewsMada
« Festival Rio Loco » : misongadina ny mozika malagasy maroloko
Nanomboka omaly ary tsy hifarana raha tsy ny alahady izao, ny « Festival Rio Loco », any Toulouse. Fotoana iray hampihaonana mpanakanto avy amin’ny firenen-tsamihafa, mivoy mozika samy manana ny tantarany sy ny niandohany ity hetsika, mahavory olona hatramin’ny iray hetsy isan-taona, ity.
Tanjony koa anefa ny hanetsiketsika ny aingam-panahin’ireo mpanakanto amin’ny fiaraha-mamorona sy ny fiaraha-miasa. Ankoatra izany, sehatra iray ampahafantarana amin’ny mponina any Frantsa any sy ny mpizahatany ny harena amin’ny kolontsaina sy zavakanto avy amin’ny faritra iray ny « Festival Rio Loco ».
Amin’ity andiany ity, hanafana ny sehatra ny mpilalao mozika sy mpihira avy aty Madagasikara sy avy any Zanzibara, Seychelles, Kaomoro, Mayotte, Maorisy, Rodrigues ary La Réunion. Azo lazaina ho matanjaka sy manana ny maha izy azy avokoa ireo hanome voninahitra an’ity Nosy ity.
Anisan’ireo nanafana ny fanokafana ity « festival » ity, omaly, ny kaompania Zolobe avy any Antsiranana, izay tsy zovina intsony amin’ny resaka kanto an-dalambe. Nifandimby niaka-tsehatra kosa, ny faran’ny tolakandro, ny tarika Saramba sy ry Damily.
Ho an’ny anio, hanokatra ny seho i Valiha Babah, tsy faheno loatra aty an-tanindrazana, saingy fantatra amin’ny filalaovana karazan-javamaneno nentim-paharazana (valiha, sodina, kabosy, sns) any ivelany any, indrindra any Toulouse. Hanafana ny seho anio alina kosa ny mpanjakan’ny salegy, i Jaojoby.
Ankoatra ireo artista voalaza ireo, mbola hifandimby hiaka-tsehatra any amin’ny « Festival Rio Loco » ry D’Gary, Régis Gizavo ary i Monika Njava, izay navondrona anatin’ny hoe Toko Telo, ary ny tarika Wawa. Etsy ankilan’izay, anisan’ny manakoako sy andrasan’ny maro koa, amin’ity hetsika ity, ny fandraisana anjaran-dry The Dizzy Brains.
Inoana fa hanatsara hatrany ny endrik’i Madagasikara sy ny kolontsaina ary ny zavakanto malagasy ny hetsika goavana toy itony.